* Light Of Myanmar *: အောက်တန်းကျနေတဲ့ မွေးမြေ
Posted by * In Search of Truth * at 10:47 AM
hello ko zawmyo...
akoh ye` oversea yout nay pay mal myanmar naing ngan taw apaw htar tae say ta nar ko knaw takal lay sar mi par tae...ako link pay htar tae post lay ko lal read pi par p...aedpost apaw knaw amyin ko sway nway naing lout aung knaw ayay achin ma shi thay loh ma sway nway tot par woo khin bya..but knaw toh sate hte hmar lal ako nae htat tu sate htar myo shi par tae....knaw toh ka totdhmar koh education atwat ka lwel loh bar ko hma sinsar sayar ma lo pay mal...koh mway yat myay atwat tot akg sone phit say chin tar myanmar tine ye` sate dat loh yone kyi par tae khin bya....ayin ka tot blogs tway hmar comment yay phoe lat shaung khe` par tae...c-box hmar tg ma yay khe` fuu par woo...aku akoh ko totdpost lay read pi hte ka pyaw chin lar loh knaw comment lite tar par ...
This is response to your comments on another article;
it is visibly appeared your hatred on foreigners in your articles and comments.This is 21st century, of course we must love our country, but do not see any point to hate foreign country ( i think you intentionally mean US ). We blame on China as they are unethically doing business with Myanmar( I prefer to use myanmar as becos i like meaning ). But no point to hate them and one day we must certainly stand side by side. Even strong muslim countries and China ally with US for them and their country's sake.
If you want to oppose to NLD or Aung San Su Kyi, this is not the right time. No one will believe on your word as everyone hate on generals. The right way is when NLD get the power ( probably never ), organize the opponents and form the strong opposition party. We want strong rival against NLD. That is true Democracy. But at the time being respect the public desire. She is elected by public with over80% votes. We want free and fair competition. If you think all democracy activists are dumb, why not??
At the last not he least, I want Than Shwe and his allies step down power not only becos of economy but also future for our country. They play very dangerous game; ethnic problem, divide in army, rooted out the country's future resources;education
So welcome any army leaders who want to sit on the table to negotiate/dialogue with NLD and ethnic
(it is visibly appeared your hatred on foreigners in your articles and comments.This is 21st century, of course we must love our country, but do not see any point to hate foreign country ( i think you intentionally mean US ). We blame on China as they are unethically doing business with Myanmar( I prefer to use myanmar as becos i like meaning ). But no point to hate them and one day we must certainly stand side by side. Even strong muslim countries and China ally with US for them and their country's sake.)
အစ်မနေနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်းငံခြားသားတွေကို မုံန်းတီးတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်အတွက် အကြောင်းပြချက်ပေးပါ။ အချက်အလက်တွေကို အတိအကျ တင်ပြပါခင်ဗျာ။ တိတိကျကျ မတင်ပြရင် မရေမရာနဲ့ မစွပ်စွဲသင့်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အစ်မအနေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို သိမ်းကျုံးပြီး ပြစ်တင်နေတဲ့ အရေးအသားတွေ ဒီမိုကရေစီသမားတွေရေးတုံးက (ဥပမာ - ကိုကဒေါင်းညင်သာ) မြန်မာတွေကို မုံန်းတီးတယ်လို့ မစွပ်စွဲကျပါ။ ကျနော်တို့ အခုတင်ပြချက်ဟာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ချက် မတရားပုံကို အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ တင်ပြထားတာပါ။ ဘယ်လိုကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေကို မုံန်းတီးတယ်လို့ ပြောနိုင်သလဲ? အဖြေပေးရဲလားခင်ဗျာ?
(If you want to oppose to NLD or Aung San Su Kyi, this is not the right time. No one will believe on your word as everyone hate on generals. The right way is when NLD get the power ( probably never ), organize the opponents and form the strong opposition party. We want strong rival against NLD. That is true Democracy. But at the time being respect the public desire. She is elected by public with over80% votes. We want free and fair competition. If you think all democracy activists are dumb, why not??)
လူအများစုက မှားတဲ့လမ်းကို လျှောက်နေရင် တောသားနှစ်ယောက် နောက်ကလိုက်ပြီး လျှောက်မှာ မဟုတ်ပါ။ လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြဖို့ စာရေးသူတွေ/ဘလော့ကာတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အရေမရ အဖတ်မရ ချီးကျူးတာ ခံချင်လို့ လူထုအလိုကျ အတင်းပြောရေးသားတဲ့ စိတ်ဓါတ် တောသားတွေမှာ မရှိပါခင်ဗျာ။ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ပြည်သူတွေ မုံန်းနေတာ မှန်ကန်တယ်လို့ ကျနော်တို့ မမြင်ပါဘူး။ အစ်မရောမုံန်းနေလို့လား? အဲဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းအရပဲ ကြည့်ကြည့်၊ တိုင်းပြည်ရှေ့ရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် မသင့်တော်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်နေတာလဲ သတင်းအတုတွေ၊ တဖက်သတ်သတင်းတွေနဲ့ ဆိုက်ဝါးလုပ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဘာကြောင့် ငတုံးတွေဖြစ်လဲဆိုတာ ဆောင်းပါးမှာ တင်ပြထားပါတယ်။ အစ်မပြောလိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ ဆောင်းပါးထဲ မှ ရေးထားတာကို အခြေခံပြီးပြောတာ မရှိပါ။ အစ်မလိုချင်တဲ့ အဖြေတွေ အားလုံးဆောင်းပါးမှာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ကို မမေးခင် ဆောင်းပါးကို အသေအခြာဖတ်ပြီးမှ မေးမြန်းတာတွေ ပြောဆိုတာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(At the last not he least, I want Than Shwe and his allies step down power not only becos of economy but also future for our country. They play very dangerous game; ethnic problem, divide in army, rooted out the country's future resources;education)
တိုင်းရင်းသားတွေပြဿနာမှာ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ ခြေထိုးတာ အများကြီး ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ဇတ်လမ်းအတုတွေ ဓါတုလက်နက်နဲ့ သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းအတုတွေနဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေအကြား သွေးကွဲအောင်လုပ်ထားတဲ့ အချက်တွေကို အစ်မ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ နောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အမြင်ကျဉ်းတဲ့ ကိစ္စလဲ ထည့်ပြောပါခင်ဗျ။ ပိုဆိုးတာ တိုင်းရင်းသား ပညာတတ်လူငယ်တွေဟာ သူတို့အချင်းချင်း လူမျိုးရေး အမြင်ကျယ်လာ အောင်လုပ်ဆောင်တာ မတွေ့မိပါ။ ဒီတော့ တိုင်းပြည်အနာဂါတ် ဒီမိုကရေစီရရင် ပြေလည်သွားမလား? ပိုဆိုးသွားမလား? အစ်မ အချက်အလက်တွေနဲ့ တိတိကျကျ ဖြေရှင်းရဲလားခင်ဗျာ? ဝေေ၀၀ါးဝါတော့ မပြောပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
( So welcome any army leaders who want to sit on the table to negotiate/dialogue with NLD and ethnic )
အစ်မတို့က ပါးစပ်နဲ့ပဲ ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုဆိုနေတာကိုးဗျ။ သိပ်လဲ ပင်ပန်းနေဦးမယ်။ အစ်မတို့အနေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ နအဖကို ဘယ်လို ဆွေးနွေးအောင်လုပ်မလဲ စဉ်းစားသင့်တယ် မထင်ဘူးလားခင်ဗျာ? အချိန်တိုင်း နအဖက တကယ်မဆွေးနွေးချင်ဘူးလို့ အပြစ်တင်နေမယ့်အစား လမ်းသစ်ရှာသင့်တယ် မထင်ဘူးလား? အပြစ်တင်တာတော့ ၅ နှစ်ခလေးတွေလဲ လုပ်တတ်တာပဲဗျ။
ကျနော်တို့ကို အထင်မကြီးပါနဲ့ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း လုပ်ရမယ့် တာဝန်လေးပါ။ တခြားလူတွေက ကိုယ့်တာဝန်ကို မယူလို့ ပါ။ အနူတောထဲမှာ လူချောလို့ ပြောရမလားပဲ။ (အခုခေတ်ကြီးမှာ မြန်မာတွေဟာ စည်းလုံးရေးပြိုကွဲနေပြီး တိုင်းပြည်ကို အရေမရ အဖတ်မရ အပြစ်တင်တာကလွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ကျပါ။ ) မဆွေးနွေးနိုင်ရင် မဆွေးနွေးပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ သိပ်တော့ ပြဿနာမရှိပါ။ အားသန်ရာ အားသန်ရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမိမိ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာ အစ်ကိုအနေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် ကို On Viewer နဲ့ Youth of Third Party ရဲ့ ဆောင်းပါး Link ကို ဆီပုံးတွေမှာ လိုက်ပြီး ဖြန့်ပေးပါ။ (၁၀ မိနစ်လောက်အချိန်ပေးရင် ဖြစ်ပါတယ်) အဲလို လုပ်ရင် တိုင်းပြည်အရေး ဆွေးနွေးချင်သူတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းပြောနေသူတွေလဲ သူတို့ လုပ်နေတာတွေကို သတိပိုထားမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပဋ္ဌ်နေထိုင် ကာ မိမိကိုယ် မိမိ မျောက် ဟု သတ် မှတ် ပြီးဆန်တောင်းသူများသည်
RAMBO MOVIE သွား ကြည့် ကာ မိမိကိုယ် မိမိ မြန်မာဟုကြွေးကြော်ပြီး ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ် လှန်ထောင်း ကာ
ကမ္ဘာ အား မိမိ တို့ သည် သနားစ၇ာ သတ္တဝါ များအဖြစ်ပြသခဲ့ကြသည်။
democracy တောင်လှန်ရေးသမားယောင်ယောင်Mr creator သည် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏ ရုပ်ပြောင်ပုံ များ နှင့်ဆဲရေးတိုင်းတာမှုများအားညှပ်ရ်ျဖန်တီးထားပြီး
မြန်မာပြည်မှပေးပို့နေသယောင်ဖြင့် blog များတွင်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းမှပြည်သူများ၏internet သုံးစွဲမှုပိုမိုကျပ်တည်းလာစေရန်ဖန်တီင်္းလျက်ရှိ
မျိုးမစစ် MYO THEIN HTUN aka Mr creator aka (အမည်မသိခွပ်ဒေါင်း)(Designer Artist )
လိုကောင်မျိုးတွေနိုင်ငံခြားကနေ လက်သီးပုံး ပြနေလို့
မြန်မာပြည်မှပြည်သူများအသုံးချ ခံရကာ democracy တိုက်ပွဲ ကြာရှည်ကာရှုံးနိမ့်လျက်ရှိ
Hey Two low life villagers,
How dare you two call Myanmar “ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်နဲ့ အောက်တန်းကျနေရတဲ့ အမိနိုင်ငံကြီး”. We are about to reach “ world first most disciplined democratic country” very soon. No country is developing like Myanmar with double digit GDP. No country is developing like us with 12 objectives. US and EU countries don’t even know how to set such 12 objectives.
Let it be this time. But Next time if you dare to say again “Myanmar is one of poorest”, I’ll send both of you to Insein.
အရေးကြီးတာက လူထုပါ လူတုလိုချင်တာ ပေးပြီး
ထိပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘယ်လောက် စားနေကြတယ်ဆိုတာ
အမြင်ကျဉ်းမနေကြပါနဲ့ တော့လို့ ပန်ကြားသတိပေးချင်ပါတယ်။
သို့ အစ်မ May Burma
အစ်မစကားကို အတင်းပြောတဲ့ ဘလော့တွေမှာ သွားပြောရင် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိတာပဲဆိုပြီး တလေးတစားပြန်ဖြေကျမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နအဖ ဘက်ဘဲ အပြစ်ပုံချပြီး ပြောင်းလဲခိုင်းတာကိုးဗျ။ ကျနော်ကတော့ မလေးစားနိုင်ဘူးဗျ။ ရှင်းရှင်းပဲပြောတတ်ပါတယ်။ “အမြင်ကျဉ်းမနေကြပါနဲ့ တော့လို့ ပန်ကြားသတိပေးချင်ပါတယ်။” အဲဒီစကား ပြောတာကိုကြည့်ရင် အင်မတန်ကို အလွယ်လမ်းလိုက်သူ ဖြစ်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုကောင်းစားဖို့ စကားလုံးလေးနဲ့ရင် မလုံလောက်ဘူး။ martin luther king jr လို သူများကို မပြင်ခင် မိမိကိုယ်ကို အရင်ပြင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဝါဒမတူတဲ့သူတွေကို တရားချနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဘာလုပ်သင့်လဲ သေသေချာချာ လေ့လာပါဗျာ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်တာက အခုလို စကားချိုချိုပြောတာထက် လက်တွေ့ကျပါတယ်။ အဲလိုလက်တွေ့ကျတဲ့သူကိုပဲ ကျနော်ကတော့ လေးစားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မောင်ဇော်မျိုး မင်းကြည့်ရတာ မောတာကွာ
အစ်မပြောလည်း ပြောလေစရာပဲဗျ။ ကျနော်က သနားစရာ သတ္တ၀ါလေးတွေလို့ အထင်ခံချင်တဲ့ ၀ါဒအစွန်းရောက် ဒေါ်ကော်ပီစုကြည် တပည့်တွေကို အဲလိုပဲ စလိုက်နောက်လိုက် လုပ်ရတာဝါသနာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခြေအနေပေးရင်လည်း အနိုင်ကျင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။